I-Casa del Agua @Pueblo Verde
Ukubaleka kwehlathi lomndeni.
Zithokozise ngokunethezeka nokuthula kwale ndlu yolwandle yomndeni. Izungezwe amanzi (ichibi elikhulu, i-jacuzzi, nomfudlana), lena i-oasis enika amandla kokubili izingane kanye nabantu abadala.
Indlu ineziqephu zikanokusho nendawo enkulu engaphandle emema izinkumbulo ezintsha ukuthi zidalwe.
Ngokusatshalaliswa okuvumela ubumfihlo obuncane, ifanele zonke izinhlobo zemindeni ezamazamayo. Amakamelo amabili kwamathathu atholakala esitezi sokuqala, phambi kwendawo yokubhukuda lapho ungabhukuda khona noma ubuke izinkanyezi ebusuku.
Igumbi lesithathu linokufinyelela okukhethekile okuvela ngaphandle, okunikeza noma ubani othatha lelo gumbi ubumfihlo nokuphumula abekulangazelela. Leli gumbi lokulala elikhulu lineshawa kanye ne-jacuzzi enokubukwa kwehlathi.
Le yindlu ephelele yokuthola kabusha isibopho sakho nemvelo, ukuphumula, nomndeni.
Futhi, ngebha yangaphandle, i-bbq, nechibi elikhulu singaqinisekisa ukuthi uzoba nesikhathi esimnandi ngempela!
U-Doris umsizi wasendlini ukhona kusukela ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo 6am - 5pm futhi uyakujabulela ukukusiza uma kudingeka.